Taariikhda My Butros » Online Dating: Ka fogaanshada qabidda Catfished
Last updated: Feb. 12 2020 | < 1
Marka xiddiga kubada cagta Notre Dame ee Manti Te'o kulmay saaxiibtiis on Twitter inuusan marnaba xitaa looga shakisan yahay wixii la soo socda soo socda. Gabadha saaxiibadiisa ku dhintay dhexe ee xilli kubada cagta uu, ama ugu yaraan inuu taas loo sheegay. Dhab ahaantii, uu la catfished by taqaaniin ah, tago Te'o qaracan iyo ceeb. Waayo, kuwa Halmaansan "catfishing" waa, waa markii online qofka ka dhigaa in ay yihiin dad aanay yihiin in ay ama qaadasho lacag ama waxyaabo kale oo ka mid ah dhibanayaasha jaahiliinta. In 2011, FBI ayaa ku qiyaastay in ku dhowaad $50.4 million lumay fiisa catfishing muujinayo darnaanta nidaamka this.
Sidee ayaad uga fiisa catfishing ilaaliyo
Catfishing waa fududahay in la garto oo ay si fudud u raadinaya wax u muuqan inay dhigma ilaa. Taa darteed marar badan, bisad Fisher sheegi doonaa sheekooyin in si fudud aan islahayn aadan. Qaab kale oo weyn goobjooga u shakhsiyad been ah waa in ay weydiiyaan dadka haddii ay ku ogaan qofka (marka bisad looga shakisan yahay Fisher sidoo kale waa saaxiib la saaxiibadaa online). Haddii ay maya tahay mid aad u ogaato abid la kulmay qofka waxay u badan tahay in ay tahay ma kuwaas oo ay sheegeen inay yihiin. Waxaa had iyo jeer fikrad fiican haddii aad dareento cat sida aad isagoo qabsan inaad dib u hubiso taariikhda qofka ee waxa kaliya oo loo arko haddii aad ka heli kartaa macluumaad kasta oo iyaga ku.
Baro wax badan oo ku saabsan catfishing iyo dhaawac waxay taasi keeni kartaa in graphic waxbarasho ka instantcheckmate.com.
Ka fogaanshada qabidda Catfished Infographic